Inona no atao hoe fahazoan-dàlana ambadika? | Martech Zone
Kanada dia mandray tsindry amin'ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny SPAM sy ny torolàlana tokony harahin'ireo orinasa rehefa mandefa ny fifandraisana mailaka amin'izy ireo vaovao Ny lalàna manohitra ny SPAM any Canada (CASL). Avy amin'ireo manampahaizana manokana momba ny fanafahana izay efa noresahiko, tsy dia mazava ny lalàna - ary heveriko fa hafahafa ny fisian'ny governemanta nasionaly manelingelina ny olana manerantany. Alao an-tsaina ange rehefa mahazo governemanta an-jatony vitsivitsy isika manoratra ny lalàny manokana… tena tsy azo atao mihitsy.
Ny iray amin'ireo lafiny amin'ny CASL dia ny mahasamihafa azy naneho ary Te hilaza fahazoan-dàlana. Ny fahazoan-dàlana voambara dia metodolojia opt-in izay nandraisan'ny mpandray ilay mailaka na nanao sonia ny tenany. Ny fahazoan-dàlana voatondro dia tsy mitovy. Indray mandeha aho dia nifamaly tamin'ny solontenan'ny mpikarakara serivisy mailaka tompon'andraikitra momba izany. Nomeny ahy ny karany fandraharahana miaraka amin'ny adiresy mailaka ao aminy - ary nampiasako izany Te hilaza fahazoan-dàlana handefa mailaka aminy ny mailako. Nitaraina nivantana tamin'ny mpanome tolotra mailaka aho ka nahatonga ny korontana. Nahatsapa izy fa tsy nanome alalana. Tsapako fa nanao izany.
Diso izy, mazava ho azy. Na dia takiana amin'ny fahazoan-dàlana voalaza aza ny fahitany manokana dia mbola tsy misy lalàna mifehy izany (mbola). Ao amin'ny lalàna CAN-SPAM an'ny Etazonia, tsy mila fahazoan-dàlana voatonona na naneho alàlana handefa mailaka na amin'iza na amin'iza ianao… Takiana fotsiny ianao hanome mekanisma opt-out raha tsy manana fifandraisana amin'ny mpanjifa ianao. Marina izany… raha manana fifandraisana ara-barotra ianao dia tsy mila opt-out akory! Na dia izany aza ny lalàna mifehy, ny mpanome tolotra mailaka dia mitondra lavitra kokoa amin'ny sehatra misy azy ireo.
Ohatra momba ny fahazoan-dàlana voaporofo mifanohitra amin'izany
Isaky ny CASL, ireto misy ohatra ny amin'ny tsy fitovizan'ny fahazoan-dàlana voalaza sy mifanohitra amin'ny hoe:
Fahazoan-dàlana voalaza - Ny mpitsidika ny tranokalanao dia mameno endrika fisoratana anarana miaraka amin'ny fikasana hapetraka ao amin'ny lisitrao. Nisy mailaka fanamafisana opt-in nalefa izay mitaky ny handefasan'ny mpandray rohy iray hanamafisana fa maniry hapetraka ao amin'ilay lisitra izy ireo. Izy io dia fantatra amin'ny hoe metodolojia opt-in. Rehefa tsindrio ny rohy dia tokony hosoratana miaraka amin'ny rakitsoratry ny fisoratana anarana ny daty / ora ary ny hajia IP.
Fahazoan-dàlana voatonona - Mpitsidika ny tranokalanao dia mameno takelaka fisoratana anarana hisintonana whitepaper na hisoratra anarana amin'ny hetsika iray. Na manome anao adiresy mailaka amin'ny alàlan'ny karatra fandraharahana na amin'ny fisavana ny mpanjifa. Tsy nanome fahazoan-dàlana mazava izy ireo fa maniry ny hahazo fifandraisana mailaka mailaka avy aminao; noho izany, naseho ny alalana - tsy voalaza. Mety mbola afaka mandefa fifandraisana mailaka amin'ilay olona ianao, saingy mandritra ny fotoana voafetra ihany.
Na dia saika milaza aza ny fehezan-tenin'ny mpamatsy mailaka rehetra fa tokony hanananao alalana, manome anao ny fomba rehetra hanafarana izay mety lisitra mety ho hitanao na hovidinao izy ireo. Ka, tsiambaratelo maloto amin'ity indostria ity dia ny ahazoan'izy ireo vola aman-taonina amin'ireo mpanjifany mandefa SPAM raha mandehandeha eraky ny indostria mivazavaza izy ireo fa tena manohitra tanteraka azy ireo. Ary ny teknolojia, algorithma ary ny fifandraisana misy eo amin'ny Super-duper dia tsy manadino ny squat… satria tsy voafehin'izy ireo izay mampiditra azy amin'ny boaty. Manao izany ny Mpanome Tolotra Aterineto. Izany no tsiambaratelo maloto amin'ny indostria.
Ahoana ny fiantraikan'ny fahazoan-dàlana amin'ny Inbox?
Fahazoan-dàlana voalaza sy mifanohitra amin'izany Tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny fahaizanao mahatratra ny boaty! Ny mpikarakara serivisy amin'ny Internet toy ny Gmail dia tsy manana famantarana rehefa mahazo mailaka izy ireo na nahazo alalana handefa azy… na oviana na oviana ny zava-misy na voalaza na tsia. Hosakanany ny mailaka miorina amin'ny verbiage, ny adiresy IP izay nandefasana azy, na algorithma maro hafa ampiasainy. Azoko ampiana hoe raha very kely ianao amin'ny famaritanao manokana ny Te hilaza, azonao atao ny mitondra ny tatitra SPAM anao ary manomboka manana fahasahiranana mahatratra ny boaty.
Nolazaiko foana fa raha tena te hamaha ny olana amin'ny SPAM ny indostria dia ataovy izay hitantanana ny ISP. Gmail, ohatra, dia afaka mamorona API ho an'ny opt-in izay FANTATRAO fa ny mpampiasa azy dia nanome alalana handray mailaka avy amin'ny mpivarotra. Tsy azoko antoka ny antony tsy anaovan'izy ireo izany. Vonona ny hanao filokana amin'ilay antsoina aho aho alalana-monina Hiantsoantso ireo mpanome tolotra mailaka raha sendra izany rehetra izany… very vola be izy ireo mandefa SPAM be dia be.
Raha mandefa mailaka ara-barotra ianao ary maniry ny handrefy ny fahaizanao manatratra ny boaty, mila mampiasa serivisy toa ny mpanohana anay ianao ao 250ok. ny mpampahalala inbox manome anao lisitra voa iray amin'ireo adiresy mailaka ampidirina ao amin'ny lisitry ny mailakao ary avy eo dia hitatitra aminao izy ireo raha toa ka mandeha mivantana any amin'ny folder junk na tsia ny mailakao na mankany amin'ny boaty. Maharitra 5 minitra vao vita. Ampiasainay amin'ny CircuPress izay ahitantsika ny fametrahana inbox mahafinaritra. Hampahafantatra anao ny serivisin'izy ireo raha tafiditra anaty lisitra mainty na tsia ny serivisinao.
Ny fepetra kanadiana dia mandray dingana hafa ary mametraka fetra 2 taona amin'ny fandefasana mailaka amin'izay olona miaraka aminy fahazoan-dàlana voatonona. Noho izany, raha misy olona manana fifandraisana ara-barotra miaraka aminao manome anao ny adiresy mailaka dia azonao atao ny mandefa azy ireo mailaka… fa mandritra ny fotoana voafaritra ihany. Tsy azoko antoka ny fomba hampiharan'izy ireo izany lalàna izany. Heveriko fa ny mpanome tolotra mailaka dia mila manamboatra ny rafitr'izy ireo mba hampiditra lisitra fanafarana fahazoan-dàlana voatondraka izay mamela anao hanisy làlana fanamarinana raha misy fitarainana. Oh, ary ny CASL dia mitaky ny hahazoanao fanekena mazava avy amin'ireo fifandraisana efa misy ao amin'ny lisitrao alohan'ny 1 Jolay 2017 amin'ny fampiasana a fanentanana fanamafisana. Ireo mpivarotra mailaka dia hanamarina izany!
Fampahalalana bebe kokoa momba ny CASL
Cakemail dia nanao asa tsara tamin'ny fanangonana torolàlana ho an'ny CASL - azonao atao izany download it here. Oh - ary raha te hitantana ny famandrihanao kely kokoa ianao dia omeo Unroll.me andrana! Izy ireo dia manara-maso ny mailaka rehetra mamely ny boaty mailakao gmail ary mamela anao hanakodia ny atiny ilainao, na hisoratra anarana amin'ny atiny izay tsy tadiavinao. Tokony hividy azy ireo ny Gmail!
Fanamarihana farany momba izany. Tsy tiako ny hieritreritra ny olona ho mpisolo vava ny SPAM. Tsy izaho… hoy aho nahazo alalana-Drafitra mailaka mifototra amin'ny valiny manome valiny ara-barotra miavaka. Na izany aza, ampiako ihany koa fa tena zava-misy aho momba izany ary nahita orinasa mitombo ny lisitry ny mailaka ataon'izy ireo ary avy eo mampitombo ny asan'izy ireo amin'ny alàlan'ny herisetra fahazoan-dàlana voatonona fandaharana.
Tags: cakemailCan-amin'ny spamKanadaFitsipika momba ny ady amin'ny SPAM any Canadacaslfanateranamanehonahazo alalanaTe hilazafahazoan-dàlana voatononamisafidy-inhiala Anaranalalàna spam
LinkedIn dia mahazo manokana amin'ny fitantarany tantara